Erin Andrews oo qaawan fiidiyowga loo daadiyay - Celebrity Porn
Erin Andrews oo qaawan fiidiyowga loo daadiyay
Fiiri Erin Andrews fiidyow qaawan oo fiidiyoow ah, halkaas oo ciyaartooydan kulul ee ciyaaraha lagu bahdilay iyada dabagal! Ninkani wuu waalan yahay nasiibna wuu u leeyahay iyada, waxaa lagu xukumay inuu waxan sameeyay doing
Intaas oo dhan ka sokow, waxay ku jirtay cinwaannada oo dhan markii ay dabagalkeeda si qarsoodi ah u duubtay fiidiyowga 4,5 daqiiqo ee dheer qolka hoteelka iyada oo loo marayo godka daloolka! Kadibna wuxuu si rasmi ah u sii daayay fiidiyowgaan! Erin gabi ahaanba way qaawan tahay fiidiyowga, waxay sameysaa timaheeda iyo qurxiyo inta aysan shaqada aadin! Tani waa wax aad u baahan tahay inaad aragto! Erin Andrews aad ayey u qiirootay markii ay arintani dhacday ka dibna dhamaan dagaaladii maxkamadaha, waxay ku dhamaatay inay dacweysato dabagalkeedii iyo hoteelkeedii 75 $ Million! Gabdha si fiican ufiican, anagaa garabkiina nahay.
Erin Andrews waa shaqsi Isboorti Mareykan ah iyo shaqsiyad TV ah. Waxay martigelisay ‘ Qoob-ka-ciyaarka Xiddigaha ‘Oo wuxuu ahaa weriye dhinaceeda ka ciyaara NFL iyo Super Bowl.ErinSawirada qaawan ee Andrews waxaa loogu codeeyay 'American's sexxiest sportscaster' sanadihii 2007 iyo 2008 waxaana u codeeyay majaladda Playboy.
Erin Andrews fiidyow xaday
Oh, dadow, Erin's boobooyin qaawan iyo xubinta taranka ayaa halkaan lagu arkay, sidoo kale boobaheeda! Waan jeclahay sida ay u dhaqmayso iyadoo u maleyneysa in qofna uusan daawanaynin. Waa wax aad u la yaab leh in la helo dabagal. Wuxuu ku arki karaa wax kasta oo fucking ah oo aad sameyneyso, iyo filim taas. Ka dib guriga ku ciyaar oo jerk! Waxaan u maleynayaa in ninkaan wax badan lumiyay dacwada kadib, laakiin ciirtiisa wax badan ayey kasbatay!
Ku raaxayso oo booqo midkayaga kale wasmo caan ah , badankood way daadanayaan, si kadis ah ama maahan! Laakiin si kastaba ha noqotee, fiidiyowga Erin waa mid ka mid ah fiidiyowyada qaawan ee gaarka ah ee waligood ka soo muuqday internetka!
Erin Andrews qaawan sawiro xaday
Waxaan ku darnay dhowr sawir oo qaawan oo qaawan oo Andrews ah, halkaas oo aan ka arki karno dameerkeeda iyo boobaheeda. Dabcan, xubinta taranka waxaa loo arkaa sidoo kale adiguba waa lagu isticmaalay! Mostra Musa waxay kuu rajeyneysaa maalin farxad leh, iska sii wad rogrogmada oo arag sawirro badan oo Erin Andrews qaawan!
2020 - macluumaad cusub oo ku saabsan kiiska:
Markaad aragtay fiidiyowga fiidiyowga kulul, waxaan u baahan nahay inaan ku siino macluumaadka cusub ee ku saabsan kiiska Erin Andrews, oo weli maxkamadda ku jira. Xulista xeerbeegtidu waxay bilaabatay maalmo yar uun ka hor. $ 75 milyan oo dacwad madani ah oo uu soo gudbiyo wariyuhuErinAndrews, oo ku eedeysay huteel Nashville dayacaad u ogolaatay dabagal inuu duubo fiidiyowyo qaawan oo iyada qolkeeda ah mar kale cinwaanada.
Andrewswaxay sheegatay hudheelka iyo milkiilayaasheeda iyo maareeyayaasheeda inay dayaceen inay u sheegaan Barrett nambarka qolkeeda oo ay u ogolaadaan inuu qol ka kireysto deriskiisa.Andrewswaxay ku eedeysay hudheelka dayacaad, uur-ku-taallo murugo shucuur iyo duulaan ku ah asturnaanta. Iyadu waa ay leedahay ujeedka. Barrett wuxuu qirtay dambiga 2009 inuu dabagalay oo uu toogtay fiidiyowyada qaawan. Waxaa lagu xukumay sanadka soo socda 30 bilood oo xabsi ah.Andrewsmarkii hore wuxuu ku magacaabay Marriott International inuu yahay eedeysane, laakiin garsooraha ayaa shirkadda ka eryay iyadoo eedaysane ah kii ugu dambeeyay. Eedeysanayaasha haray waa Barrett iyo milkiilayaasha hoteelada Nashville iyo maareeyayaasha. Maxkamadaynta ayaa socon doonta qiyaastii laba toddobaad, ayuu yidhi Ku-xigeenka Maamulaha Maxkamadda Wareegtu. Hadda waxaan sugeynaa mid ka mid ah tijaabooyinka ugu waaweyn ee bilaabmaya! La soco dadyahow!
Erin Andrews sawiro kulul
Sexy sportscaster iyo tv-ga martida loo yahay Erin Andrews waxay umuuqataa ilaah markay shaqadeeda qabaneyso. Sidoo kale, waxay umuuqataa mid kufiican bikininka iyo rooga cas, markay xirantahay dharka ayna muujineyso lugaha dhaadheer! Ku raaxeyso dadweynow!
Mid ka mid ah warbixinnada warbaahinta ee maxkamadda:
kelly rowland sawiro qaawan
dua lipa sawiro qaawan
jajabka muuqaalada galmada jacaylka
vivica dawaco sawir qaawan